कालिञ्चोक भगवतीले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् चैत्र २७ गते शुक्रबारको राशिफल Canada Nepal
कालिञ्चोक भगवतीले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन् ! हेर्नुहोस् चैत्र २७ गते शुक्रबारको राशिफल
मेष राशि - गरीरहेको कार्यको क्षेत्रमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा सामान्य समस्या देखापर्नेछ । नयाँ लगानी नगरेकै बेश रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा खर्चिएको समय मध्यम रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य अपजसको सामना गर्नु पर्ने सम्भाबना रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ ।
चैत्र २७, २०७७ शुक्रवार ०६:४३:१० बजे : प्रकाशित